၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား ဂုဏ်ပြုသီချင်း သီဆိုမယ့် မင်းသား Will Smith
အိုင်စီစီကို တုန့်ပြန်ရန် အစိုးရနှင့် တပ်မတော် ခွဲခြားနေ၍ မဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံးပြော
“ဥပါဒါန် ရုပ်ရှင်အတွက် အပြင်မှာ ရက်အတော်ကြာ ဘုန်းကြီးဝတ်ခဲ့တယ်”ဆိုတဲ့ ခိုင်ထူးသာ
ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ Harvey Weinstein ကို သတ်ပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ဖူးတဲ့ Brad Pitt
ကြောင်ချစ်သူတွေ မိမိတို့ ကြောင်လေးတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အမှားများ
ကျန်းမာရေး မကောင်းလို့ ကားရိုက်များ နားထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် မယ်လိုဒီ
ထူးခြားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များနဲ့ Samsung Galaxy A6+ စမတ်ဖုန်း
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချနေသူတွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အလေ့အထ အမှားများ
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း နာဂျစ်ထံမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇.၆ မီလျံကျော် သိမ်းဆည်းရမိ
မော်လမြိုင် NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပါတီဝင်အချို့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ထံ တိုင်ကြားခံရ
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စီးပွားရေး အစီအစဉ် အောင်မြင်နေဟု ဆို
ရေသိုးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ငရဲခန်းမှာ လပေါင်းများစွာ
နေပြည်တော်ဟာ တစ္ဆေမြို့ မဟုတ်တော့ပါ
သစ်ဖမ်းမိမှုကို ပိုင်ရှင်မဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့သည့် ရဲ ၅ ဦးအား ရဲတရားရုံးစွဲချက်တင်ပြီ
ကင်ဂျုံအန်းနှင့် စင်ကာပူတွင်တွေ့ဆုံရေး နှောင့်နှေးနိုင်ဟု ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပြော
အသံ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ ကြည့်ရှုဖို့ အကြံပြုချင်တဲ့ “A Quiet Place” ရုပ်ရှင်
ဆေးရုံမှာ ၂ ပတ်နီးပါး ဆေးကုသမှု ခံယူရဦးမယ့် သရုပ်ဆောင် ဦးဝင်းနိုင်(အနုပညာ)
မြန်မာသီချင်း ဆိုဖို့အတွက် မြန်မာစာကို လေ့လာနေတယ်ဆိုတဲ့ “အဝင်း”
မုဒိမ်းကျင့်ခံရပြီး သေဆုံးခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ မိသားစုကို လှူဒါန်းတဲ့ ဘေဘီမောင် ဝေဖန်ခံနေရ
Instagram မှာ ကိုယ်မမြင်ချင်တဲ့သူရဲ့ ပို့စ်တွေ ပေါ်မလာအောင် Mute လုပ်ထားနိုင်ပြီ
သံဓာတ် အလုံအလောက် ဖြည့်တင်းပေးနိုင်မယ့် အစားအစာများ
“LGBT မဟုတ်ပါဘူး၊ ယောကျာ်းလေးပဲ စိတ်ဝင်စားတာပါ” ဆိုတဲ့ အဆိုတော် ဆိုဖီယာ
အဆိုတော် အစ္စဏီ အမှုရုံးချိန်းကို တရားလို ခရီးလွန်နေခြင်းကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းထား
Fujifilm Myanmar မှ မိုရီဆာကီဝင်းကို Brand Ambassador အဖြစ် ခန့်အပ်
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရုံဝင်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ကျော်သွားခဲ့တဲ့ “A Quiet Place’” ရုပ်ရှင်
ARSA ၏ အစုလိုက်သတ်ဖြတ်မှု နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ ဖော်ထုတ်
အလုပ်လုပ်ပြီး ပင်ပန်းနေပေမယ့် ပညာရပ်အသစ်တွေကို လေ့လာနိုင်မယ့် အချက် ၅ ချက်
မင်းသား Will Smith
By မစ်ကီ 24 May 2018
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဟာ လာမယ့် သီတင်း ၃ ပတ်လောက်မှာတော့ ရုရှားနိုင်ငံမှာ စတင်ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂီတလုပ်ငန်းနဲ့ အချိန်တော်တော်ကျင်လည်ခဲ့ဖူးတဲ့ မင်းသား Will Smith ကတော့ အခုနှစ် နွေရာသီမှာ ကျင်းပတော့မယ့် တရားဝင်ကမ္ဘာ့ဖလားဂုဏ်ပြုတေး သီချင်းမှာ ပါဝင်သီဆိုမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ် ထားတဲ့အတိုင်း Rap စာသားတွေ ပြန်လည်သီဆိုတော့ မှာလည်း ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Billboard အပါအဝင် ဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာ ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ သတင်းတွေအရ မင်းသား Smith ဟာ မကြာမီ ရုရှားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတော့မယ့် ကမ္ဘာ့အကြီးအကျယ်ဆုံး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို ဂုဏ်ပြုဖို့ မေ ၂၅ ရက်မှာ သီချင်းသစ် တပုဒ်ကို ဖြန့်ချီမယ်လို့ သိရပါတယ်။
တချိန်တုန်းက ဂီတပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အသက် ၄၉ နှစ်အရွယ် မင်းသားဟာ American Nicky Jam ၊ ထုတ်လုပ်သူ Diplo နဲ့ Kosovar အဆိုတော် Era Istrefi တို့ကို ပို့စ်တခုမှာ Tag တွဲပြီး “One Life to Live. Live It Up. #WorldCup” ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့အတူ ပုံတခုကို တင်ခဲ့ပါတယ်။
တရားဝင်ကမ္ဘာ့ဖလားဂုဏ်ပြုတေးကတော့ ၃၂ သင်းပတ်လည်ပွဲစဉ်တွေကနေစလို့ ဗိုလ်လုပွဲအထိ ကာလ တလျှောက်လုံးမှာ အသုံးပြုတဲ့ သီချင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တုန်းက ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားဂုဏ်ပြုတေးကို Pitbull, Jennifer Lopez နဲ့ Claudia Leitte တို့က သီဆိုခဲ့ပြီး သီချင်းနာမည်ကတော့ ‘We Are One (Ole Ola)’ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁ဝ ခုနှစ်တုန်းက တောင်အာဖရိက နိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ ဂုဏ်ပြုတေးနာမည်ကတော့ ‘Waka Waka’ ဖြစ်ပြီး အဆိုတော် Shakira က သီဆို ပေးခဲ့ပါတယ်။
ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာ လူမျိုးရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက် ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ရုရှားနိုင်ငံမှာ အငြင်းပွားဖွယ်ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ကျင်းပခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်း ၃၂ သင်းဟာ တလကြာမြင့်မယ့် ပတ်လည် ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး အဖွင့်ပွဲစဉ်ကိုတော့ ဇွန်လ ၁၄ ရက်မှာ ပြုလုပ်မှာပါ။ အဖွင့်ပွဲစဉ်အဖြစ် အိမ်ရှင် ရုရှားအသင်းနဲ့ ဆော်ဒီအာရေးဘီယားအသင်းတို့ ကန်ကြမှာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အောက်တိုဘာလမှာတော့ မင်းသား Smith ဟာ ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာပြီးတော့မှ ‘Get Lit’ လို့ အမည်ရတဲ့ ပထမဆုံး တကိုယ်တော် Single သီချင်းတပုဒ်ကို ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီသီချင်း ပါဝင်လာမယ့် အယ်လ်ဘမ် ထွက်ရှိမယ့် သတင်းကတော့ အရိပ်အယောင်တောင် မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ မင်းသား Smith ဟာ ကမ္ဘာ့နာမည်အကျော်ကြားဆုံး Pop စတား တဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Topics: ကမ္ဘာ့ဖလားသီချင်းဆိုမယ့် Will Smith